बिहिबार, मंसिर ४, २०७७ सारङ्गी न्युज
के पि शर्मा ओलीज्यु
हामी जुन उत्साह बोकेर स्थायी सरकारको पक्षमा उभियौ र नेकपा लाई अत्याधिक बहुमत दिएर तपाईं सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ । हामिले चुनाब जित्नैकालागी गरिएका बांँचाहरु त्यतिबेला अत्यान्तै सस्ता भए । अब बिस्तारै महङो हुँदै गैरहेको छ । हामिले पहिलाका सरकारका पालाका जनमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेनौ । त्यो नै हाम्रो दुर्भाग्य साबित भएको छ । चुनाबताका र भोटकालागी बाडिएका युवा रोजगार र बिदेश पलायन रोक्ने जस्ता कार्यक्रम ठिक उल्टा हुँदै गै रहेका छन । खै उध्योग खोल्नु भएको ? खै नंँया नंँया बिकासका योजना ? रेल त सपनाको राजकुमार जस्तो भयो अनि पानी जहाज ? हामिलाई रेल, जहाज चाहिएको थिएन काम चाहिएको थियो । स्वास्थ सिक्षा स्वास्थ्य चाहिएको थियो ।
बिहिबार, मंसिर ४, २०७७, ०५:५३:००